July 2016 - Page 35 of 36 - iftineducation.com
Caydiid iyo Cali mahdi yaa gardarnaa?
aadan21 / July 2, 2016
iftineducation.com – Caydiid iyo Cali mahdi yaa gardarnaa? Waan ognahay marka uu dhacay maxamed siyaad barre waxaa la soo doortay madaxweyne Cali mahdi maxamed oo ahaa nin ganacsate ah, wuxuuna ka dhshay beesha abgaal, laakin ninka horistaagay wuxuu ahaa caydiid oo dagaal ku qaaday afar bilood dagaalkaas oo kaalin weyn ka qaatay burburka xamar. dagaalkaas waa dagaalkii ugu horeeyay oo somaliya…
Genaral Caydiid iyo cuntadii dhgaxa sheeko lalayaabay
iftineducation.com – Sheekadan haddii aad akhriso waxaad ogaanaysaa dhabta soomaali ka jirta, G. Maxamed Faarax Caydiid wuxuu ka mid ahaa hoggaamiye kooxeedyada kaalinta weyn ka cayaaray burburka dalka soomaaliya, waxaa la dhihi karaa waa ninka ka dambeeyay baa’ba soomaaliya, ninkan wuxuu ka dhashay beesha habargidir oo degta galkacyo, wuxuu rabay inuu xoog ku qabsado xamar iyo shabeelaha hoose ilaa iyo kismaayo.…
ninka naagtiisa ma usiigeyn karaa?
iftineducation.com – Daawo video: Qaabka loo salaaxo dumarka raaxada waallida ahna loo dareensiiyo “sirta nolosha” Bulsha:- Salaaxista haweeneydu, kuma koobna oo qura labada naas, balse waxa loo baahan yahay in la salaaxo meelo kale oo jirka kamid ah sida; labadeeda warqood, gudaha bowdooyinka, gumaarka, faruuryaha cambarka, iwm. Waxaan muran ku jirin in haweeneyda ninkeeda ay jeceshahay uu labada cajar dhexdooda kaga…
sagsi ama wasmo waa maxay?
aadan21 / July 1, 2016
iftineducation.com – DAAWO MUQAALKA :Farsamooyin Ku Sahlaya Inaad Biyaha Wax Badan ceshato waqtiga galmada Farsamooyin Ku Sahlaya Inaad Biyaha Wax Badan Hayso Si Aad waqti deer u hesho Waxaan halkaan uga hadlaynaa sidee la isaga daaweeyo biyo baxa deg deg ah. Waxa jira taba bar nafsaani oo aad isaga daaweyn karto biyo baxa deg deg ah, waxaana lagu magacaabaa Kegel Excercise. …
Ogow:- Goorta ay siigada bannaan tahay
iftineducation.com – Goorta ay siigada bannaan tahay waa xiligee, siigada ama seegada qofba siduu u garanayo culimada muslimiinta way isku khilaafeen inay xalaal tahay ama xaaraan ay tahay, laakin culimada badankooda waxay u arkeen inay xaaraan tahay, sidaa awgeed mad’habka shaafici wuxuu u arkay inay siigada xaaraam tahay taasna ayay soomaalidu raaceen, laakin iyadoo sidaas ay tahay ayaa haddana culimada diidan…
wasmo muuqaal ah ma…
iftineducation.com – Waxa uusan shaki ku jirin in Ibta labada naas iyo mantiqada ku hareersan ee midibkoodu yahay (Pink Iyo Brown-ka) in ay yihiin goobaha ugu dareenka badan naasaha ,balse waxaa qalad ah in goobahas la kiciyo ka hor inta aan la soo bisleyn jirka intiisa kale . Iyadoo la eegayo aqoonta ama fanka galmada waxaa ninyahoow lagaaga baahan yahay in…
60 jir isticmaalaysa ugxanta gabadheeda
iftineducation.com – Haweeneey lixdan jirta ayaa dalka Britain, ku guulaysatay dacwad maxkamad si ay u isticmaasho ugxanta gabadheeda oo dhimatay si ay ilmo u dhasho. Gabadheeda ayaa ugxanteeda ku kaydisay qaboojiye loogu tala galay ugxanta markii ay jirtay labaatan iyo saddex sano, kadib markii uu kansar ku dhacay. Waxay dhimatay shan sano ka bacdi, iyadoo ka dardaarantay inay rabto in hooyadeed…
sawiro wasmo ah oo la dawado cuduradaan laga qaadaa
iftineducation.com – Horey uma aamini jirin in jaceylka aragtida ugu horeysay uu yahay mid jira,laakin maalin nolosheyda si gaarka ah ugu calaamadeysan,wadnaheyga wuxuu u dhaqaaqay si aan kala joogsi laheyn,waxaan saacado gadaal usii qooraansanaayey halkii aad ka dhaqaaqday ilaa ley weydiiyo inaan arkay wax mucjiso ah,maxey iga ogyihiin in si lama filaan ah indhaheyga u qabteen jalaqsane aad u qurux badan…
Aqriso Waxyaabaha Keena Madax Adeega Caruurta & Qodobo Kuu Sahlaya Sidaad Ula Dhaqmi Lahayd Caruurta Madaxa Adag
iftineducation.com – Sidee Ayaan Ula DHaqmeynaa Caruurta Madax Adag?!. Ugu horeyntii,Ilaah ayaa mahad iska leh,Nabigeena naxariis iyo nabadgalyo korkiisa ha ahaato (NNKH). Intaas kadib,su’aalaha u baahan in la fahmaa waxey tahay waa maxay madax adag? Maxaa keena sideese loola dhaqmi karaa? Madax adeygu ma aha ilmuhu marka ay yaryihiin kaliya,balse kuwa waa weyba waa yeelan karaan,haddaba madax adeygu waa maxay? *Madax…
Sheeko dhacdo wasmo dhab ah
iftineducation.com – Markii laga hadlayo dareenka dhanka kacsiga dumarka way adagtahay sida ay dhaqsi ku kacsadaan waxay u baahanyihiin mudo in la raadiyo meelaha ugu dhow ay ka kacsadaan hadaba waxaa soo baxday daraasad muujineesa in dumarka aan sida sahal aan ku kacsan loo helay hab aad u sahlan kana dhib yar habkaasi oo ah inta aan la sameen galmada in…